ကိုယ်ချင်းစာ တတ်ပါစေ(ဆောင်းပါး) | https://khaingkyawsanmusics.wordpress.com
ဗမာအပါအ၀င် ကျန်တဲ့ ကချင်၊ကရင်၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊မွန်၊ချင်း၊ကယားဒီလူမျိုးတွေက ဘာကြောင့် အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ဂျပန်လက်အောက်ကိုရောက်နေစဉ်တုန်းက ဘာကြောင့် လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်ခဲ့ကြသလဲ။အဖြေကရှင်းပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ ကံကြမ္မာကို သူတို့လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ဘိုးဘွားတွေပိုင်တဲ့ နယ်မြေဒေသတွေကို စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ချင်လို့ပဲ။သူများစီမံ အုပ်ချုပ်တာကို မလိုချင်လို့မခံနိုင်လို့ အင်မတန်အင်အားကြီးတဲ့ နယ်ချဲ့ကျူးကျော်သူတွေကိုတောင်သူတို့ပိုင်တဲ့ မြေပေါ်မှ ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်၊သူ့ကျွန်မခံနိုင်သောမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ဖြင့် တော်လှန်မောင်းထုတ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား။အဲလို ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ကတိက၀ပ်တွေနဲ့ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ အတူတကွ လက်တွဲပြီး ကျူးကျော်လာသူနယ်ချဲ့တွေကို မောင်းထုတ်ခဲ့လို့ လွှတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ စကားလုးံကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြတယ်။
ရှေးအတိတ်သမိုင်းက ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့နားလည်မှုယုံကြည်မှုတွေဆောက်တည်ပြီး အတိတ်အာဃာတတွေကို ဘေးချိတ်ပြီးတော့လွှတ်လပ်ရေးဆိုတာကြီးကို အရယူခဲ့ကြတယ်။အင်း..အဲဒီလွှတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ရလာကတည်းက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြတာ အခုချိန်ထိ ဗမာလူမျိုးမှတစ်ပါး တစ်ခြားမရှိခဲ့ပါ။အဲလို အုပ်ချုပ်လာတဲ့တစ်လျှောက်မှာလည်းသူတို့နဲ့
အတူတကွ လက်တွဲပြီး နယ်ချဲ့တွေကို တော်လှန်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဗမာမဟုတ်သော လူမျိုးတွေကို မတရားနှိပ်စက်၊တိုက်ခိုက်၊ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်စီး၊သမီးပျိုများသာမဟုတ် အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးများပါမကျန် ခြေတော်တင် မုဒိန်းကျင့်၊Genocide (လူမျိုးပြုန်းသတ်ဖြတ်မှု)များပြုလုပ်၊မတရား အခွန်တွေကောက်၊၄င်းဒေသတွေမှ ထွက်တဲ့ သစ်သီးဝလံမှ အစသံယံဇာတ အဆုးံ မတရားသိမ်း အဲလိုမျိုးတွေ လုပ်လာခဲ့တာနှုစ်ပေါင်း ၆၉နှစ်ကျော် ကြာလှပြီပေါ့။
ဗမာမဟုတ်တဲ့ လူမျိုးတွေက ဗမာကိုခါးသီးမုန်းတီးစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဟာ ဗမာတွေရဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ကတိမတည် သစ္စာဖောက်မှုတွေကြောင့်ပဲ ဆိုတာ အထင်အရှားပါ။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလို့ တီဗွီ သတင်းစာတွေမှာ
ဘယ်လောက်ပဲ ပြပြဗွီဒီယိုကားတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရိုက်ပြ ရိုက်ပြ ရာထူးရာခံ အဆင့်အတန်းတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိသာလွန်းနေပါတယ်။ဌါနဆိုင်ရာတစ်ခု၏ အကြီးအကဲ တစ်ယောက်ကိုဗမာမဟုတ်သော လူမျိုး တိုင်းရင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး လေ့လာကြည့်မိတဲ့အခါတိုင်း ရင်မောရပေါ့။
ဌါနတိုင်းလိုလို ဗမာတွေကပဲ နေရာယူအမိန့်ပေး စေခိုင်းနေတာတွေပဲတွေ့နေရတော့ ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အာဘောင်ရင်းသန်သန် လူကြားကောင်းအောင် ပြောနေတာတွေဟာ အဖိနှိပ်ခံလူမျိုးတွေအဖို့ ပျက်လုးံတစ်ခုကို ကြားနေရသလိုပင်။အဆိုးဆုးံကကိုယ်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့် တောင်းဆိုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကိုတောင် သူတို့အရိုးနဲ့သူတို့ကို ပြန်ထိုးခိုင်းပြီး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ချော့ခါတစ်လှည့်ခြောက်ခါတစ်လှည့် ချေမှုန်းနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဂျပန်တို့ အင်္ဂလိပ်တို့ထက်ရက်စက်ကောက်ကျစ်သော နည်းဗျူဟာပင် ဖြစ်သည်။အချင်းချင်းရန်တိုက်ပေး၊မတွေ့အောင် လုပ်၊အချင်းချင်း ရန်စောင်နေတဲ့ အချိန် ကြားက၀င်ဖြိုခွဲ ဒီလိုမျိုး သတ်လျှိုလုပ်နေတာဟာ ဗမာအာဏာပိုင်တို့၏ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ နည်းတွေထဲကအကြံအစည်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့စကားလှလှလေးတွေအောက်မှာဗမာမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေ ခါးစည်းခံနေရတာ ဗမာအာဏာပိုင်တွေကျူးကျော်စော်ကားသမျှ ရေနှုံငုတ်ပိတ်နေနေရတာတွေဟာ ဗမာနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးယုံကြည်နားလည်မှုတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်၏ အကျိုးရလဒ်ပင် ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါက မှားမည်မထင်ပါ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ပင်လုံကို ဦးတည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖျက်စီးပြီး လက်ဝါးကြီးအုပ် လက်နက်အားကိုးဖြင့်ဗိုလ်ကျစိုးမိုးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့် ဗမာကတိုင်းရင်းသားတွေကို
ပြည်ထောင်စုလို့အမည်တပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက အစိုးရ စာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးတာနဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုရတယ်။”ကမ္ဘာမကျေဗမာပြည် တို့ဘိုးဘွားအမွေစစ်မို့ တို့ချစ်မြတ်နိုးပေ”ဆိုတဲ့ စာသားတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်သီချင်းကြီးကပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုးံရဲ့နိုင်ငံတော်သီချင်းကြီးတဲ့လေ။
ကချင်၊ကရင်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ကယား၊မွန်၊ရှမ်းအဲဒီလူမျိုးအားလုးံကို ဗမာအဖြစ်ပြောင်းပလိုက်ပြီး ဗမာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ လူမျိုးတွေကို ပြည်ထောင်စုသီချင်းပါဆိုပြီး
ဆိုခိုင်းနေတာဟာ မောင်ဖြူ ကိုမောင်မည်းလို့ အတင်းလုပ်ပလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။။
မြန်မာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုလို့အမည်တပ်ထားပြီး ဗမာတွေက ကချင်အ၀တ်အစားတွေဝတ်
ရှမ်းအ၀တ်အစားတွေဝတ်ရခိုင်အ၀တ်အစားတွေဝတ် ဗမာသီချင်းဆိုပြီး ကပြနေတာတွေက မြန်မာ့ရိုးရားယဉ်ကျေးမှုတဲ့လားဗျာ။ဗမာဆိုတဲ့ နာမည်ကို မြန်မာဆိုပြီး ပြောင်းပလိုက်ရုံနဲ့ဗမာပြည်ကကနေ မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောင်းခေါ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစစ် ဖြစ်မသွားပါဘူး။
ပြည်ထောင်စုကိုဦးတည်နေလား။တစ်ပြည်ထောင်စနစ်ကို ဦးတည်နေလားဆိုတာက အသိသာကြီးပါ။ဗမာတွေလည်း တစ်ခြားလူမျိုးတွေနဲ့ အတူတူပါပဲလို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေ ပြောနေ ဗမာတွေလည်း ဆင်းရဲမွဲတေနေတာပဲလို့ ပြောနေပါစေ
စီမံကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သူတွေဟာ ဗမာလူမျိုးတွေသာ ဖြစ်တယ်။မိဘမကောင်းလို့ သားသမီးခံရတာ အပြစ်မဆိုသာပေမဲ့ ပထွေးမကောင်းလို့ တစ်ခြားလူမျိုးတွေ ဓားစာခံအဖြစ်နဲ့ ဒုက္ခရောက်နေရတာ ရင်နာစရာပါ။ဘယ်လူမျိုးမဆို ကိုယ့်စာပေ ယဉ်ကျေးမှုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်ဒေသကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်ကြပါတယ်။
လူသားတိုင်းအတူပဲ။ ဗမာလည်း ကိုယ်ပြည်ကို ကိုယ်ချစ်လို့ သူများလက်အောက်
သူများအုပ်ချုပ်မှုအောက် မှာ မနေချင်လို့တော်လှန် တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား။
ဗမာလူမျိုးနည်းတူ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်း ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိမယ်ဆိုတာကို တွေးကြည့်စရာတောင် မလိုပဲသိနိုင်ပါတယ်။
ဗမာစာ ဗမာသမိုင်းကို တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကပဲသင်ယူရမယ်။သူတို့စာပေ သမိုင်းကို သင်ခွင့်မပေးဘူး။သူတို့စာပေ သမိုင်းကိုသူတို့သိလို့ မျိုးချစ်စိတ်တွေ ၀င်လာရင် ဗမာကို တော်လှန်လာမယ်ဆိုပြီးအတွေးမှားနေလို့ကတော့ အစစ်အမှန် ပြည်ထောင်စုဆိုတာကြီးတော့ ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီအမတ်တစ်ယောက်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီ အမတ်တွေကို တစ်ယောက်တင်ပြလာလည်းရခိုင်ကထွက်တဲ့ဂစ်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်ကို မီးလင်းအောင်လုပ်ပေးပါ နောက်တစ်ယောက်လာလည်း မီးလင်းအောင် လုပ်ပေးပါလို့တောင်းနေကြတာပဲတဲ့လေ။
အဲလို ပြစ်ပြစ်ခါခါ မိုက်ရိုင်းစွာပြောဆိုခဲ့တယ်။သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် မကြည့်ပဲ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဗျာ။ရခိုင်ကထွက်တဲ့ဂစ်နဲ့
ရခိုင်ကို မီးလင်းလာအောင်လုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာကိုအပြစ်လို့မြင်နေရင် ဗမာပြည်ကထွက်တဲ့ဆန်စပါးတွေနဲ့ ရခိုင်ဂီရီဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီပါလို့ တောင်းဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင် ထတောင်သတ်မလားမသိဘူး။
ဒေသစွဲရှိတယ် ဆိုပြီး ရသမျှသံယံဇာတ အကုန်ဗမာပြည်သို့ယူဆောင်နေတာဟာ တော်တော်ကိုအရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်တုန်းက ဆီပေးရင် ဆန်ရတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ဗမာ့အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှာ ဆီပေးလည်း ဆန်မရသေးတဲ့အပြင်အရိုက်တောင် ခံရသေးတယ်။မိအေး နှစ်ခါနာ ဆိုသလိုမျိုးပေါ့။ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊စစ်ဦးစီးချုပ် ကအစ အဓိကပင်မ အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေ၊ရာထူးကြီးကြီးတွေမှာ အားလုးံဗမာလူမျိုးတွေချည်းပဲ။
ဗမာမဟုတ်တဲ့ကချင်၊ကရင်၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊ကယား၊ချင်း၊မွန် တွေက ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပဲ တွင်တွင်ခါ တောင်းနေကြလဲဆိုတော့သူတို့ပြည်ကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ချင်နေကြလို့ပဲ။
သူတို့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ဖန်တီးချင်ကြလို့ပဲ။ဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကသာ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမှာကို စိုးလို့ ပြည်ထောင်စုထဲကခွဲထွက်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုပြီး ကန့်လန့် ကန့်လန့် လုပ်နေကြတာဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဗမာလူမျိုးတစ်ခုတည်းကသာ ပြည်ထောင်စုကိုချစ်တတ်တယ်ထင်တယ်။ကျန်တဲ့ လူမျိုးတွေက မချစ်တတ်ဘူးလား။
တကယ်တော့ ဗမာတွေက ကိုယ်စီကိုယ်စီ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် သူတို့လုပ်သမျှ ဖိနှိပ်လိုသမျှမရတော့မှာကို စိုးလို့နဲ့တူတယ်။ဗမာတွေတွေးကြည့်ပါ။
ဗမာပြည်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်း(၇)တိုင်းကို ဗမာမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားလူမျိုးတွေက လာအုပ်ချုပ်နေရင်နှိပ်ကွပ်နေရင် လက်နက်အားကိုးဖြင့် အနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်နေရင်ကြိုက်ကြမလားဗျာ။ဘယ်သူမဆို ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ကြိုက်ကြပါ့မလဲ။ကိုယ်စားချင်ကြည့်စမ်းကြပါဗျာ။
သူတို့လည်းသူတို့ပြည်မှာ သူတို့အစိုးရနဲ့ ဖြစ်ချင်ကြမှာပဲမြင်ချင်ကြမှာပဲ။အဲဒါကြောင့်လည်း တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့။ခင်ဗျားတို့အင်္ဂလိပ်၊ဂျပန်ကို မုန်းခဲ့သလိုမျိုး ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းမုန်းတီးနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရ ပြောရရင် ၀ဋ်ဆိုတာ လည်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်ကလေးနဲ့ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ကိုယ်ထမ်းထားရတာမဟုတ်တဲ့ တာဝန်မယူခိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုကို ဘာကြောင့် အမုန်းခံ အသက်တွေအသေခံပြီး ထမ်းထားမှာလဲ။ပေးလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ သူတို့တွေလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး၊သူတို့တွေ ကံကြမ္မာကို သူတို့တွေဖန်တီးကြစမ်းပါစေလား။(ရွှေမြောက်ဦး)
မျှဝေရန်FacebookEmailTwitterLike this:Like Loading...
Filed under ကိုယ်ချင်းစာ တတ်ပါစေ(ဆောင်းပါး), ဗမာ(ဆောင်းပါး)
About khaingkyawsan009@gmail.comI have Interest on Computer's Technique And I Like To listen Cold Songs.Listening To Song Is giving Relaxation For Me.I Feel,Listening To Songs Is Like Freedom။
I Think,Songs Can Give Portability In My Mind. I Created This Music Site On 11 January 2011 To Can Listen By Everyone.IF You Get New Songs,Please Send InTo My Mail.Thank You All.Coming AGain။
Comment များပေးနိုင်ပါသည်။သင်ပေးခဲ့သောComment များအား ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Cancel reply	Enter your comment here...
နောက်လည်းအလည်လာပါ။	ရခိုင့်အားမာန်(ဆို-ရခိုင်အမျိုးသားများ)	တေးသီချင်း ပို့ပေးသူများ စာရင်းကို အောက်က ပုံကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Popular Songs	လေးဖြုစာမျက်နှာ(၁၅) တေးစီးရီးသီချင်း	တုနှိုင်းမမှီ ထူးအိမ်သင်(ဗမာတေး)	You Can Search For Here The Songs You Want After You Type.
Social Network	Social Network
Coalition As Serial Months(လအလိုက်စုစည်းမှုများ)	Coalition As Serial Months(လအလိုက်စုစည်းမှုများ)
ပင့်ရစ်မနိုင် ရခိုင်ကိုမေး	Recent Posted Songs	ချစ်သူ(ဆို-Pi Soul+နန်းသန့်-ဗမာတေး)
စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့စိုင်းဆိုင်မောဝ်တို့၏ တေးသီချင်း စုစည်းမှုများ
ဆိုတေး တေးသီချင်း စုစည်းမှုများ(ဗမာ)
တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ နိန်ရ နိန်ရ(ရခိုင့်ဆရာတော်ရို့ဧ့တရားတော်)
မိုနို ရခိုင်တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ
မျိုးဆက်နွယ်စိုင် ပြည်ရခိုင် တေးစီးရီးသခြင်း
ရခိုင် ဂုဏ်ဆောင် တေးသခြင်း
ရခိုင်ဆရာတော်ရို့၏ တရားဒေသနာတော် စုစည်းမှုများ
ရခိုင်နန့်ဗမာ တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှများ
ရခိုင်သူနာင့် အခြားတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ
ရခိုင့်ဂီတ အာဟာရ တေးစီးရီးသခြင်း
ရခိုင့်ဟီဟော့ တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ
ရခိုင်ဂုဏ်ဆောင် တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ
ရင်ခွင်ဦးကဗျာ တေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ
ရိုးတောင်ထက်သုိ့ ဓားမမိုးစီချင် တေးစီးရီးသခြင်း
လခြမ်းမြီမှ ကြိုဆိုပါ၏ တေးစီးရီးသခြင်း
သာလီစွ သာစွလီ တေးစီးရီးသခြင်း
သိကေ ဇာလုပ်ကတ်ဖို့လဲ၉၏(၂)(ရခိုင့်ဆရာတော် တရားတော်)
အပယ်တံခါး မပွင့်စီချင်(စေတီပြင် ဆရာတော် တရား)
ဦးနေမျိုးဝေ ဘာသာပြန်ထားသော ကုရ်ကျမ်း
ဦးမောင်သိန်း မိုနိုတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ
ဖော်ကာ ဗမာတေးသီချင်း စုစည်းမှုများ
၀င်းကိုခိုင်၏ အာရက္ခမြေတေးသခြင်းတိ စုစည်းမှုများ
Starry Night တေးစီးရီးသခြင်း
တစ်နေ့တာ အလည်လာရောက်သူများ	အလည် လာရောက်သူများ	ဆောင်းပါးများ
မဲပီးပါ။	Take Our Poll